Etu esi mepụta ọdịnaya a na-ekekọrịta | Martech Zone
Etu esi mepụta ọdịnaya a na-ekekọrịta
Sọnde, Septemba 6, 2015 Sọnde, Septemba 6, 2015 Douglas Karr
Dabere na The New York Times Ahịa Ndị Ahịa na akwụkwọ akụkọ ọhụrụ, Psychology nke ringkekọrịta, enwere isi ihe ise mere ndi mmadu ji ekerita ihe na ntaneti:
uru - Iji weta ndị ọzọ ihe bara uru ma na-akụzi ihe
Identity - Tokọwa onwe anyị nye ndị ọzọ
Network - Itolite ma zulite mmekọrịta anyị
Ntinye - Mmezu onwe, uru na itinye aka na ụwa
Eme - spreadgbasa ozi banyere ihe na-akpata ma ọ bụ ụdị
Akwụkwọ akụkọ New York Times bụ nchọpụta dị egwu ma nyere onwe ya aka n'ọrụ anyị na-arụ ebe a na Martech. Mgbe anyị monetize anyị akwụkwọ, na saịtị onwe ya adịghị onwe-ezu (ọ bụ ezie na anyị na-e). Martech Zone na-enye ụlọ ọrụ anyị na-eduga. Teknụzụ Azụmaahịa, Teknụzụ Azụmaahịa na Teknụzụ Ntanetị ụlọ ọrụ na-abịakwute anyị ka ha wulite ọnụnọ weebụ ha ma bulie òkè ahịa ha. Ha na-eme nke a n'ihi ntọala ntụkwasị obi na uru anyị nyere site na isiokwu anyị ebe a.
Anyị amachaghị banyere ọdịnaya anyị họọrọ ide na ịkekọrịta ma rụọ ọrụ iji mee ọtụtụ n'ime ya shareable ọdịnaya. Kedu ka anyị si edozi isi mmalite (dị ka New York Times nchọpụta), dee ọdịnaya anyị, ma mee ka ọ bụrụ ihe nkesa?
Platform - Tupu anyị amalite ide, anyị agbala mbọ hụ na saịtị anyị na-akwado ịkekọrịta. Ihe onyonyo aputara na nkpuru ahihia huru na emejuputara ọdịnaya anyi maka ikerita mmadu. Na-efu ntọala a nwere ike imebi ọbụna ọdịnaya kachasị mma site na ịkekọrịta. Ọ dịghị onye chọrọ inwe ọrụ na ịkekọrịta ọdịnaya gị. Mee ka ọ dị mfe.
Isiokwu Isiokwu - A na - akọrọ data ndị na - arụrịta ụka, ụfụ, na ịkwụsị akụkọ na - abụghị eziokwu. Okwu ndị ahụ na-esekarị okwu na-eme ka anyị na ndị isi ụlọ ọrụ nwee esemokwu mana anyị na-asọpụrụ ndị ọgbọ na ndị ahịa anyị.
Ihe oyiyi bara ụba - dinggbakwunye ihe osise na-ese onyinyo dị egwu na uche mmadụ. Lelee ihe atụ nke anyị wuru maka post a. Ọ na-ese onyinyo doro anya nke na-eme ka ịmata ihe ma na-enye ebe ọ ga-eme ma ọ bụrụ na ọ na-eme ya n'èzí n'enweghị njikọ.
Ọdịnaya bara uru - Ọ bụrụ na Google kwupụtara mgbanwe dị mkpa nke nwere ike imetụta ndị na - agụ akwụkwọ anyị, anyị na - ekekọrịta azịza iji mee ka ndị na - agụ akwụkwọ anyị nwee ike ịgafe. Anyị anaghị ekerịta ozi ụlọ ọrụ dịka itinye ego, mgbanwe ọnọdụ, ma ọ bụ njikọta ndị na-anaghị emetụta ndị na - agụ akwụkwọ anyị.
Ọdịnaya bara uru - Ọ bụrụ na ọdịnaya nwere ike ịbawanye nloghachi gị na itinye ego ma ọ bụ belata ụgwọ gị, anyị hụrụ n'anya ịkekọrịta ngwọta ahụ ma ọ bụ ngwaahịa ahụ. Ọdịnaya a na-eme ka ọtụtụ nleta gaa na mbipụta anyị.
nchọpụta - Anyị na-ekerịta nnyocha nke teknụzụ metụtara azụmaahịa na azụmaahịa kwa izu na teknụzụ teknụzụ azụmaahịa ka ị nwee ike ịmara na e nwere ihe ngwọta dị ebe ahụ ewuru maka nsogbu nke nzukọ gị. Chọpụta ngwa ndị a emeela ka anyị bụrụ ebe ama ama maka ụlọ ọrụ, ngalaba ahịa na ahịa.
Education - O zughi iji tebụl azịza, anyị na-anwa igbachi nchoputa ọ bụla na ndụmọdụ maka ndị na - agụ akwụkwọ anyị ka ha nwee ọganiihu. A na-ekekọrịta ọdịnaya nke na-eme ka ndụ ha dị mfe. Nnukwu ndụmọdụ na-adịghị efu ego siri ike ịchọta ụbọchị ndị a!
Ihe mkpado anyi bu Nnyocha, Chọpụta, Mụta na ebumnuche ndị ahụ na-eme ka ịkekọrịta ọdịnaya anyị. Nbịaru anyị na-aga n'ihu na-eto ọnụọgụ ọnụọgụ abụọ na-enweghị akwụ ụgwọ maka nkwalite - ọnụ ọgụgụ mara mma. N'ezie, o were anyị afọ iri iji mụta atụmatụ ndị a. Ma n'ezie - anyị na-eso ha kerịta ndị na - agụ akwụkwọ anyị! Anyị chọrọ ka ị bụrụ nke ọma.
Enwere onwe gị ịkekọrịta onyonyo anyị mepụtara iji gosi ihe mere ndị mmadụ ji akpali ịkekọrịta n'ịntanetị:
Ọdịnaya Gị na-esi isi n'ihi na ọ na-efu ihe ndị a
Apr 26, 2016 na 1: 44 AM
Amalitere m ịgụ nke a na ọ bụghị nnukwu ihe mana achọtara m karịa ka m tụrụ anya ya. Echiche dị mfe ma dị ike ebe a. Daalụ. Enwere m olileanya na m jikwaa soro ụfọdụ n'ime ndị a 🙂